January 2016 - Sawirrotv
Wasiirka Amniga Gudaha oo Looga yeeray Magaalada Baledweyne (VIDEO)
January 31, 2016 – Wafdi uu Hogaaminaayo Wasiirka Wasaaradda Amniga Qaranka, C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa waxa uu maanta gaaray Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan. Wafdiga Wasiirka ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay Garoonka Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, halkaasoo ay salaantii ka dib ay ka galbiyeen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom. Wafdiga Wasiirka oo Xildhibaano …
Dalka Ingariiska oo Heshiis Dhanka Amniga ah la Saxiixaday Soomaaliya (SAWIRRO)
January 31, 2016 – Wasiirka Gaashaandhigga ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdqaadir Sheekh Cali Diini iyo Safiirka dalka Boqortooyada dalka Ingariiska u fadhida Soomaaliya Amb, Harriet Mathews ayaa maanta xarunta safaaradda Britain ee magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis wax wada qabsi oo dhanka Amniga ah. Wasiir Diini ayaa sheegay in heshiiskani uu wax …
Dadkii Badda ku Geeriyooday (VIDEO)
Booliska dalka turkiga ayaa qabtay nin ay uga shakiyeen inuu kamid ahaa muqalasyadii dadka doomaha ku waday. Xafiiska Sawirro.com Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo Sheegay in Dowladda Dhexe ay Go’aamisay Qaabka Doorasho ee 2016 (VIDEO)
January 31, 2016 – Madaxweynaha maamulka Galmudug mudane, C/kariin Xuseen Guuleed ayaa markii uu dib ugu soo laabtay Magaalada Cadaado ka war bixiyay shirkii uu uga Qeyb Qaatay Magaalada Muqdisho, Madaxweynaha ayaa ku dheeraaday ka hadalka shirkii Muqdisho iyo fashilkii ku yimid Madaxda Maamul goboleedyada iyo go’aanka ay Qaadatay Dowlada Soomaaliya. Waxa uu Sheegay inuu aad uga …
Hadalkii C/kariin Xuseen Guuleed (VIDEO)
Madaxweynaha ayaa ka hadalay shirkii Muqdisho iyo fashilkii ku yimid Madaxda Maamul goboleedyada iyo go’aanka ay Qaadatay Dowlada dhexe ee Soomaaliya. Xafiiska Sawirro.com Muqdisho
Turkiga oo Digniin Kama Danbeys ah u Diray Xukuumadda Ruushka (VIDEO)
January 31, 2016 – Dowlada Turkiga ayaa sheegtay in mid kamid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ay maalintii Jimcaha ahayd ay kusoo xadgudubtay hawada dalka Turkiga gaar ahana meel ku dhaw xadka ay wadaagaan Dalka Turkiga iyo Siiriya. Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay xadgudubka Ruushka ayaa mar kale uga digay …
Digniintii loo Jeediyay Dalka Ruushka (VIDEO)
VIDEO – 1 Dowlada Turkiga ayaa sheegtay in mid kamid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ay maalintii Jimcaha ahayd ay kusoo xadgudubtay hawada dalka. VIDEO – 2 Xafiiska Sawirro.com Muqdisho
Kenya oo ka Shakisan in Ciidamada Dowladda ay ku Lug Lahaayeen Weerarkii Ceel Cadde
January 31, 2016 – Qubaro ay dawlada Kenya u xilsaartay inay baaraan sida uu u dhacay weerarkii Ururka Al-Shabab ku qaadeen xerada Ceel-Cadde ee gobolka Gedo ayaa sheegaya inay baarayaan eeda la xariirta doorka ay ciidamada dawlada Soomaaliya ku lahaayeen weerarkaas. Wargayska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in qubaradan ay la …
Qaxooti Badan oo ku Geeriyooday Badda u dhaxaysa Turkiga iyo Gariiga (VIDEO)
January 30, 2016 – Wararka Inaga soo gaaray dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 33 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku geeriyoodeen badda u dhaxaysa dalalka Gariiga iyo Turkiga. Dadkaasi oo ahaa tahriibayaal waxa ay doonayeen inay gaaraan dalka Giriigga, ilaalada xeebaha dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegeen …